Pet Brush Vagadziri & Vanopa | China Pet Brush Fekitori
Inodzoserwa Yakakura Imbwa Inotsvedza Brashi
1. Nyorovera bvudzi munzira yekukura kwebvudzi. Iyo bristles iyo inobvisa yakasununguka bvudzi, kubvisa tangles, mapfundo, dander uye yakavharirwa tsvina.
2. Mapini anodzoserwa anokuchengetera nguva yakakosha yekuchenesa. Kana iyo pad yakazara, unogona kusunungura bvudzi nekusundidzira bhatani riri kumashure kwepad.
3. Inodzoserwa hombe imbwa inotsvedza bhurashi neyakagadzikana-inobata mubato, ingo bata bhatani riri pamusoro pebrashi kuti uburitse bvudzi zviri nyore.zvichanyatso kubatsira kugadzira mukana wakasununguka uye unonakidza wekushambadzira imbwa yako.
Imbwa Kuchenesa Slicker Brush
1.Dog yekushongedza inotsvedza bhurasho ine yakasimba mupurasitiki musoro ine yepamusoro simbi isina simbi pini, inogona kupinza yakadzika mukati mejasi kubvisa yakasununguka undercoat.
2.Dog yekushongedza inotsvedza bhurasho zvinyoronyoro rinobvisa rakasununguka bvudzi, rinobvisa tangles, mapfundo, dander uye yakavharirwa tsvina kubva mukati memakumbo, muswe, musoro uye imwe nzvimbo inonzwisisika pasina kukwenya ganda remhuka yako.
3.Iyi imbwa yekushongedza inotsvedza bhurashi inogona zvakare kushandiswa kune fluff-yakaoma mhuka dzinovaraidza dzine ganda rakajeka uye dzakanaka, jasi re silky.
4.Kuwedzera kutenderera kweropa uye kunosiya zvipfuwo zvako zvakapfava uye zvinopenya. Kugadzira kukwesha chipfuwo chako ruzivo rwakasununguka uye runonakidza.
5.Ergonomic dhizaini dhizaini inopa nyaradzo kana uchikwesha kunyangwe wareba sei muzinga, zvinoita kuti kushambidzika kuve nyore.
Pet Kuchenesa Turu Imbwa Brashi
Pet yekushongedza chishandiso imbwa bhurashi yeiyo inoshanda deshedding chishandiso, Round pini side inoparadzanisa yakasununguka imbwa bvudzi, Bristle divi rinosimudza yakawandisa kudurura uye dander
Iyo yekushambidza peturu chishandiso imbwa bhurashi inobatsira kugovera echisikigo oiri kune yakatsetseka inopenya jasi.Brush zvinyoro-nyoro munzira yekukura kwebvudzi, nechengetedzo yakakosha kutenderedza nzvimbo dzakaomarara.
Uku kushambidzika kwechipfuwo kunoshandisa nyaradzo yekubata mubato, yakachengeteka zvakanyanya kubata.
Kaviri Akatenderedzwa Flexible Pet Slicker Brush
1.Pet Slicker Brush inoita basa rakakura rekuchenesa matted bvudzi, kunyanya kuseri kwenzeve.
2.Iye zvakare inochinjika, izvo zvinoita kuti ive yakasununguka kune imbwa.
3.Dhiviri yakatsigira inochinja pet slicker bhurasho inodhonza bvudzi zvakanyanya, saka kuratidzira kwembwa kwakajairwa zvakanyanya.
4.Iri bhurasho rinowedzera kuenda pasi kuburikidza nebvudzi kubatsira kudzivirira kukakavara.
1.Iyi yekuzvishambidza yekuchenesa inotsvedza yeimbwa yakagadzirwa nesimbi isina simbi, saka inogara yakasimba.
2.Iye yakanaka yakakotwa waya bristles pane yedu inotsvedza bhurasho rakagadzirirwa kuti ripinde zvakadzika mukati mejasi rako rechipfuwo pasina kukwenya ganda remhuka yako.
3.Iyo yekuzvishambidza yekuchenesa slicker bhurashi kune imbwa zvakare ichasiya chipfuwo chako neine nyoro uye inopenya jasi mushure mekushandisa uchidzizora nekuvandudza kutenderera kweropa.
4.Nekushandisa nguva dzose, iyi yekuzvichenesa yekuchenesa slicker brashi kunoderedza kuteura kubva kumhuka yako nyore.
Kuzvishambidza wega Pet Slicker Brush